Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 8)
Sida loo xiro barnaamijyada leh Waqtiga Shaashada ee iOS 12
Mid ka mid ah sheeko-qorista ugu habboon ee ay ka mid tahay ayaa ah qaabka Screen Screen-ka kaas oo noo oggolaan doona inaan xannibo isticmaalka barnaamijyada ku saabsan iPhone-ka.
Qufulka smart Danalock V3 ayaa hadda laga heli karaa Apple Store
Qufulka smart Danalock V3 ayaa hadda laga heli karaa Yurub iyada oo loo marayo Apple Store
Libratone waxay ka dhigi doontaa laba ka mid ah kuwa ku hadla wireless-ka AirPlay 2 kuwo iswaafajiya
Libratone waa shirkadii ugu dambeysay ee shaacisa in qaar kamid ah qalabkeeda ay la jaan qaadi doonaan heerka cusub ee Apple, AirPlay 2
Khariidadaha Apple ayaa shaqeynaya saacado yar
Dhammaan isticmaaleyaasha waxaa saameyn ku yeeshay dhicitaankii Khariidadaha Apple saacado kooban galabta. Waa run…
Steam Link ayaa ku soo laabtay foomka beta ee iOS iyo tvOS
Hadda Steam Link wuxuu ku soo laabtay App Store labada iOS iyo tvOS mar labaad, qaab beta ah.
Adobe Photoshop Express wuxuu ku darayaa astaamo cusub cusbooneysiintii ugu dambeysay
Tifatiraha muhiimka ah ee Adobe ee barnaamijyada moobiilka, Adobe Photoshop Express, ayaa hadda la cusbooneysiiyay isagoo ku daray qaabab cusub.
iOS 12 waa beta-kii ugu fiicnaa shantii sano ee la soo dhaafay
Waxaan sii wadeynaa tijaabinta macruufka 12 waxaanan ku soo gabagabeynayaa inaan wajaheyno beta-kii ugu fiicnaa ee ay Apple bixiso shantii sano ee la soo dhaafay.
Forbes: mid ka mid ah iPhones-ka cusub ayaa lagu dari doonaa muraayadda gadaal ee saddexda ah
Xanta, wararka iyo wixii ka sareeya dhamaan qorshooyinka qarsoon waa waxa ugu horeeya ee noo yimaada kahor ...
Kiisaska kicinta si loo ilaaliyo iPhone-kaaga iyo Apple Watch xagaagan
Catalyst wuxuu na siiyaa kiisas loogu talagalay iPhone iyo Apple Watch oo leh heerar kala duwan oo ilaalin ah oo gaari kara mitirka 100 ee caabbinta biyaha.
Waxay yiraahdaan IPhone wuxuu kori doonaa isku xiraha USB C dhawaan
In yar, haddii aysanba jirin cid garaneysa tallaabooyinka ay shirkadda Cupertino badanaa sameyso, ayaa rumeysan in ...
Samsung ayaa diiday inay bixiso $ 539 milyan oo ay Apple siisay moobilka iPhone-ka
Dagaalku wuu socdaa hadana maalmo kadib maalmo aan maqalnay markale maxkamadeynta ...
Isku xirka App Store waa aaladda cusub ee Apple u adeegsato soosaarayaasha
Apple waxay bilawday barnaamijka App Store Connect, oo ah codsigan cusub ee badalaya iTunes Connect wuxuuna na siinayaa inaan helno dhamaan xogta barnaamijyadeenna laga heli karo App Store.
Horumariyayaashu waxay hadda ku bixin karaan betaskooda iyagoo adeegsanaya xiriiriye dadweyne
Apple waxay soo bandhigtay muuqaal cusub oo ku saabsan tijaabada 'TestFlight' si ay ugu sahlanaato horumariyayaashu inay la wadaagaan barnaamijyadooda tijaabiyaasha beta
Sida Loola Soo Degsado Codadka Dhageysiga iPhone-ka iyada oo aan lahayn iTunes ama Jailbreak
Casharkaan waxaan ku sharaxeynaa sida looga soo degsado codadka iphone-ka iphone ama iTunes la'aan, si deg deg ah oo fudud.
macruufka 12 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kula wadaagto macOS Mojave furayaasha sirta ah iyo websaydhka adoo adeegsanaya AirDrop
Waxaan ogaanay wax cusub, waana in iOS 12 ay kuu ogolaaneeyso inaad la wadaagto furahaaga sirta ah iyo boggaga internetka macOS Mojave ilaa AirDrop.
Ming-Chi Kuo ayaa sheegay in farqiga u dhexeeya iPhones-ka sanadkan uu noqon doono ilaa $ 100
Ma dhihi karno marwalba way guuleysataa, laakiin ma dhihi karno marwalba way dhacdaa. Falanqeeyaha caanka ah ee Apple Ming-Chi Kuo, ayaa bilaabay ...
Gawaarida cusub ee 3D Touch ee loogu talagalay Kaameerada iyo Xusuusin ku jirta iOS 12
IOS 12 waxaa ku jira ikhtiyaarro cusub oo 3D Taabasho ah sida dokumentiga iskaanka ama sawirka QR ee qoraallada iyo barnaamijyada Kaamirada.
Sonos wuxuu noqon doonaa AirPlay 2 mid ku habboon bisha Luulyo
Shaki la'aan tani waa war aad ufiican dhamaan isticmaaleyaashaas kuwa kafekeraya iibsashada afhayeenka iyo ...
IOS 12 waxay ku siineysaa dhammaan macluumaadka ku saabsan isticmaalka bateriga
IOS 12 waxay na siineysaa raaxo iyo macluumaad cusub oo naga caawin doona inaan ogaano barnaamijyada ay yihiin kuwa daadiya baterigeena
Tani waa sida shaqada Walkie-Talkie ee watchOS 5 u shaqeyso
Mid ka mid ah riwaayadaha yar ee ay watchOS 5 na siiso ee aan la xiriirin cayaaraha waa shaqada Walkie-Talkie
Transcend's JetDrive Go 500 waa xasuus USB ah oo si gaar ah loogu talagalay iPhone iyo iPad. Waan falanqeyneynaa oo waxaan kuu daynay khibradeena
Dhageysi Toos ah ayaa imanaya AirPods-ka iOS 12
AirPods waxay heli karaan muuqaal cusub oo laxiriira marin u helida dadka maqalka naafada ka ah: Dhageyso Toos ah.
Tani waa sida ogeysiisyada ugu jiraan iOS 12
IOS 12 waxay la timid warar yar iyo horumar. Mid ka mid ah kuwa hagaajiya adeegsiga taleefankayaga iPhone-ka ku dhowaad iyada oo aan la ogaan, laakiin markaa muhiim noqda. Tani waa kiiska wararka ee ogeysiisyada iOS 12.
Xarkaha Apple Watch cusub iyo Kiisaska iPhone X
Marka lagu daro qadarka barnaamijka softiweerka ee la sii daayay shalay galab, waxaan haynaa wax soo saar cusub ...
Waxyaabo cusub oo cusub oo iOS 12 ah Apple kuma xusin WWDC18
Waxaan kuu keenaynaa dhammaan wararka iOS 12 ee Apple uusan kuu sheegin, kuwaas oo aan badnayn isla markaana sidoo kale aad u khuseeya, sida shaqooyin badan oo cusub iyo kumbuyuutarka saadaasha ah.
Apple waxay si hufan u cusbooneysiineysaa Mac App Store si ay mar labaad u soo jiidato horumariyayaal
Waxaa la gaadhay waqtigii la siin lahaa Mac App Store oo waji loogu talagalay, taasi waa waxa ay ragga Apple ka bixiyeen intii lagu jiray WWDC18.
macOS Mojave wuxuu diirada saaraa arimaha gaarka ah, wuxuu hagaajiyaa qalabka shaashadda wuxuuna keenaa codsiyo cusub
Tan WWDC18 Apple waxay go'aansatay inay ku darto tiro wanaagsan oo warar ah qaab codsiyada iyo hagaajinta waxqabadka macOS sida News, Home iyo waxyaabo kale oo badan.
FaceTime waxay u oggolaan doontaa wicitaanada kooxda oo ay ku milmaan farriimaha iOS 12
IOS 12 ayaa kuu oggolaan doonta inaad sameyso wicitaanno fiidiyoow ah oo koox ah oo aad si buuxda loogu dhexgeliyo Animojis, Memojis iyo Messages.
Ogeysiisyo kooxaysan ayaa imanaya iOS 12, ugu dambeyntiina Apple wuu fahamsan yahay muhiimadda ay leedahay
Apple waxay aakhirkii fahantay muhiimadda ay leedahay isu-keenidda ogeysiisyada ee Xarunta Ogeysiinta waxayna soo bandhigtay inay tahay wax cusub oo iOS 12 ay la imaan doonto.
U soo dejiso waraaqaha WWDC ee iPhone-kaaga
Waxaan dhowr saacadood u jirnaa furaha Apple ee laga furayo San Jose, Xarunta Shirarka McEnery, mana sugi karno ...
HomeScan waxay kaa caawineysaa inaad hubiso baaxadda qalabkaaga HomeKit
HomeScan waa codsi aasaasi ah oo lagu ogaanayo haddii qalabkaaga 'HomeKit accessories' uu la yimaado calaamadda lagama maarmaanka u ah qeybta kontoroolka si wax walba ay si sax ah ugu shaqeeyaan.
Apple waxay cusbooneysiin doontaa ARKit-keeda si ay labo iphone iskaga dhexgalaan isla xaqiiqda la kordhiyay
ARKit wuxuu noqon karaa mid ka mid ah xirmooyinka horumarineed ee laga cusbooneysiin doono WWDC 2018. Apple waxaa laga filayaa inay u oggolaato horumariyeyaasha inay abuuraan meel la wadaago oo istiraatiiji ah oo u dhaxeysa laba boosteejo.
Sida hoos loogu dhigo macruufka 11.4 ilaa iOS 11.3.1
Waxaan ku baraynaa inaad hoos u dhigto qalab leh iOS 11.4 oo ah nooca 11.3.1, habkan waxaan ku xaqiijin karnaa inaan ku rakibi karno Cydia qalabka Electra marka CoolStar cusbooneysiinayo.
Kanye West albumkiisa cusub ayaa laga heli karaa Apple Music tan iyo markii la sii daayay
Kanye West albumkiisa cusub wuxuu u yimaadaa Apple Music iyo sidoo kale aalado kale, isagoo iska dhaafaya ka reebitaanka albumkiisa ugu dambeeyay ee Tidal.
IPhone SE 2 ilaaliyaha shaashadda oo leh xoqad iyo ka yar ayaa daadanaya
Waxaan ka hadlaynay in ka badan hal sano sidii loo bilaabi lahaa jiilka soo socda ee iPhone SE, qalab yimid ...
Ma jiri doono MacBooks ama iPad cusub WWDC 2018
Apple ma soo bandhigi doonto qalab cusub WWDC 2018, waa inay sugtaa illaa xagaaga ka dib si ay u aragto MacBook iyo iPad cusub.
Bisha Juun oo dhan, Nintendo wuxuu bilaabi doonaa ciyaarta 'Pokémon Quest game' ee loogu talagalay iOS, ciyaar cusub oo Pokémonkeenu u aado jasiirad ay tahay inay abuuraan xero iyagoo la dagaallamaya kuwa kale ee la midka ah.
Waxaan falanqeynay Ring Video Doorbell 2, Ring's video intercom iyo kamera ilaalin oo kuu oggolaaneysa inaad aragto cidda garaacaysa albaabka gurigaaga iyo inaad soo ogaatid kuwa ku soo xadgudbay
Kuwani waa wararka cusbooneysiinta 11.4 ee HomePod
HomePod wuxuu helayaa cusbooneysiintiisii ​​labaad ee ugu muhiimsanaa ilaa maanta, oo ay kujirto AirPlay 2, adeegsiga sitooyo oo leh laba kuhadal ama marin u helka jadwalka.
Kanada, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa yeelan doona HomePod iib ah 18ka Juun
Waxay umuuqataa in arrimuhu ay usocdaan waxoogaa yar marka loo eego suuqgeynta HomePod. Apple wuxuu qorsheynayaa inuu bilaabo ...
CarPlay hadda waxaa lagu heli karaa in kabadan 400 oo nooc oo Maraykanka ah
Soosaarayaasha gawaarida ee bixiya CarPlay waxay sameeyaan in kabadan 400 oo nooc oo tiknoolajiyaddan ay heli karaan macaamiisha Mareykanka.
Xiaomi Mi Mix 2s VS iPhone X, ma jiri karaa qiimo jaban?
Waxaan wajaheynaa Xiaomi Mi Mix 2S iyo iPhone X waji ka waji oo noqon doona mid muran badan dhaliya. Marka waxaan rabnaa inaan shaaca ka qaadno runta ku saabsan suurtagalnimada wax soo saar iyo iibinta taleefannada sare ee kaliya 499 euro
U diyaarso digniinta garaaca wadnaha oo sareeya Apple Watch-kaaga
Apple Watch waxay awood u leedahay inay ogaato heerka garaaca wadnaha oo kacsan mararka qaarkood in aysan aheyn in sare loo qaado waxayna kuu soo diri kartaa digniin. Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loo qaabeeyo.
Sida loo seexiyo iPhone-ka inta la dhagaysto Podcast ama marka la dhammeeyo
Ma rabtaa inaad geliso iPhone hurdo toos ah intaad dhageysaneyso podcast? IPhone-kaaga ayaa shaqadan u leh heer ahaan waana ogaan doonaa sida loo isticmaalo
Mophie wuxuu bilaabay xirmo safarka ah si uu ugu xiro iPhone-ka silig-la’aan
Shirkadda Mophie waxay soo bandhigtay baarkinka safarka oo aan ku yeelan karno isla kiiskan, wax kasta oo aan u baahan nahay si aan u awoodno inaan ku soo dallacno iPhone X, iPhone 8 iyo iPhone 8 Plus markaan safar galnay.
Sida si joogto ah loo tirtiro Aqoonsiga Apple
Asturnaanta waxay noqoneysaa mid ka mid ah tiirarka aasaasiga ah ee shirkadaha waaweyn. Kadib cusbooneysiinta Xeerka Ilaalinta Macluumaadka, Apple waxay soo kordhisay qalab si ku meel gaar ah looga saarayo Aqoonsiga Apple.
9 × 32 Podcast: HomeKit, Su'aalo iyo Jawaabo
Waxaan ku siineynaa taladeena si aad uga bilowdo adduunka HomeKit, waxaan ka jawaabeynaa su'aalahaaga waxaana kuu sheegeynaa qalabka aan jecel nahay.
Waxaan ku celin. Hadda waa Canalys kuwa sheegaya in iibinta Apple Watch ay tahay guul
Waxaas oo dhan iyada oo aan runtii la ogayn tirooyinka rasmiga ah ee ay bixiso shirkadda Cupertino. Waana taas tan iyo markii aan ogahay ...
Fikradan macruufka ah ee iOS 12 waxay na siinaysaa Xarunta Wargelinta ee aan wada dooneyno
Fikrad cusub ayaa na siinaysa Xarun Ogeysiis ah oo loogu talagalay iOS 12 oo in ka badan midkeen naga saxiixi doono iyadoo indhahayagu u xiran yihiin iPhone-keena
Apple waxay xaqiijineysaa inay baahin doonto shirka furitaanka ee WWDC bisha Juun 4
Shirkadda Cupertino ee fadhigeedu yahay ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in WWDC 2018 ay heli doonaan qof walba, xitaa haddii aanaan haysan akoon horumarineed.
Belkin wuxuu ku dhawaaqay Laydhka-illaa-3,5mm Jack Cable ee iPhone
Qalabka soo saaraha Belkin ayaa hadda soo bandhigay fiilo cusub oo noo oggolaaneysa inaan ka soo qaadno muusikada iPhone-ka illaa 3,5 mm xiriir ah, oo ku habboon isku xirka codka codka baabuurkeenna ama rikoodhkeena.
10-ka sare ee Fortune 500, Apple ayaa lumisay hal boos ilaa afaraad
Shirkadda Cupertino ayaa hadda ka dhacday kaalinta saddexaad illaa afaraad qiimeynta sanadlaha ah ee Fortune….
Laba iyo toban South AirFly, xalka ugufiican ee loogu isticmaalo dhagaha dhagahaaga Bluetooth meelkasta
Twelve South waxay na siineysaa adapter-keeda cusub ee AirFlym, oo ah xalka yar si aan u awoodno inaan u isticmaalno headphones-ka wireless-ka meelkasta oo aan jogno, kuna xirno soosaarka Jack ee qalab kasta.
Sudio Niva, "True Wireless" maahan inuu qaali noqdo
Sudio wuxuu na siiyaa samaacado cusub oo wireless ah oo isku dhafan tayada codka qiimo aad u tartan badan iyo ismaamul la aqbali karo.
iPhone X Tesla, oo ah iPhone X oo leh kiis gaar ah oo ku kacaya ku dhowaad 5.000 oo doolar
Marka ay timaado shakhsiyeynta qalabkeena, iyo sidoo kale ilaalinta, suuqa waxaan ka heli karnaa ...
Amazon waxay bixisaa maanta 21-ka Maajo
Waxaan doorannaa heshiisyada ugu wanaagsan ee Amazon ee ku saabsan qalabka loogu talagalay iPhone iyo iPad, iyadoo qiimo dhimisyadu u dhexeeyaan 30 illaa 40% laakiin taasi waxay socon doontaa oo keliya illaa dhammaadka maalinta.
Spigen Classic One, iPhone X-gaaga oo wata naqshad asal ah
Waxaan falanqeyneynaa Spigen Classic One kiis, kiis xusuus ah oo u beddelaya iPhone X-gaaga asalka asalka ah adoo ilaalinaya
Ku raaxeyso xiddigaha Star Rover, bilaash wakhti xadidan
Haddii aad had iyo jeer dooneysay inaad ku raaxeysato xiddigaha, arag xiddigiska iyo in ka sii badan, mahadsanid Star Rover waa suurtagal iyo qaab aad u fudud.
Ma dooneysaa inaadan ka maqnaan hal kulan oo ka mid ah Koobka Adduunka ee soo socda ee Russia 2018? Waxaan ku tusineynaa sida loogu daro jadwalka kulanka jadwalkaaga iPhone ama iPad
AirFly, isku xiraha jack-ka ee Airpods-kaaga (iyo wixii dhegaha ku xirta ee Bluetooth)
Haddii aad waligaa ubaahantahay inaad iskuxidho samaacadahaaga Bluetooth oo aad aragtay in ikhtiyaarkaaga kaliya uu ahaa deked jaak, mahadsanid AirFly waxaad awoodi doontaa inaad u adeegsato iyaga dhibaato la'aan.
Mercedes-Benz waxay soo bandhigeysaa xariiqda qalabkeeda loogu talagalay iPhone, iPad iyo laptops
Shirkadda Mercedes-Benz ayaa soo bandhigtay xariiqda ay ku shaqeyneyso oo loogu talagalay laptops-ka iPhone, iPad iyo Apple. Waxaad wax uga heli kartaa dhammaan dhadhanka. Xitaa xeedho iyo fiilooyin ayaa lagu daray
Facebook wuxuu tirtiray illaa 583 milyan oo akoonno been abuur ah illaa iyo hadda 2018
Nadiifintu waxay sii socotaa Facebook. Mark Zuckerberg shabakadiisa bulshada waxay sii wadaa inay si adag ushaqeyso si ay nadiif ahaato oo ...
Tani waxay noqon laheyd xeedho deg deg ah 18W oo leh USB-C oo loogu talagalay iPhone iyo iPad
Muuqaalo cusub oo laga soo qaatay 18W xeedho ayaa u muuqda kuwa lagu dari doono iPhone-ka cusub iyo iPad-ka ee la sii dayn doono dabayaaqada sanadkan.
Lenovo wuxuu na tusayaa iPhone X iyada oo aan la ogeyn
Waxaa jira dhowr shirkadood oo qalabka Android-ka ah oo aan ku aragnay Shirweynihii Dunida ee Sannadkan ee dhiirraday ...
YouTube loogu talagalay macruufka wuxuu ku darayaa taageerada fiidiyowyada HDR ee iPhone X
Raadinta weyn ee Google ayaa hadda soo saartay cusbooneysiin cusub oo ku saabsan barnaamijka YouTube ee iOS cusbooneysiin ah ...
IPhone-ka ugu jaban ayaa kor u qaadi lahaa shaashadda LG G7 ThinQ
Dhamaan wararka xanta ah waxay si toos ah u tilmaamayaan inaan arki doono dhowr nooc oo iPhone ah bisha Sebtember, waxay ka hadlayeen ...
Sida loo ogaado xoogga calaamadda WiFi ee laga helo iPhone
Ma rabtaa inaad ogaato xoogga shabakadaha WiFi ee kugu hareeraysan si faahfaahsan adoo adeegsanaya iPhone ama iPad? Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida looga helo arjiga
Horeyba waxaa u yaalay dhamaan baytariyada badalashada iPhone-ka
Ka dib bishii Janaayo ee la soo dhaafay Apple wuxuu ku dhawaaqay barnaamijka beddelka bateriga ee dadka isticmaala iPhone ...
Sidee looga soo kabtaa Sawirro dhawaan la tirtiray oo ku saabsan iPhone
Ma rabtaa inaad ka soo kabato sawirro ama fiidiyowyo aad si kadis ah u masaxday iPhone-kaaga, iPad-ka ama iPod Touch? Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida ay u fududahay soo kabsashadoodu
JUUK Viteza, raaxada talyaaniga ee Apple Watch-kaaga
JUUK wuxuu na siinayaa laba nooc oo cusub oo ah Apple Watch xargaha oo laga sameeyay maqaar laguna heli karo midabbo kala duwan: Monza iyo Viteza.
IPhone X Plus wuxuu ahaan doonaa cabirka iPhone 8 Plus.
IPhone X Plus cusub wuxuu la imaan doonaa cabir isku dhow kan hadda jira ee iPhone 8 Plus laakiin leh shaashad gaari doonta 6,5 inji
Apple waxay u adeegsan kartaa bandhigyada MLCD iPhones-ka soo socda
Apple waxay isticmaali kartaa shaashadaha LG iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad cusub oo loo yaqaan 'MLCD' taas oo ku guuleysata dhalaal sare iyadoo adeegsigeedu hooseeyo 2018 iPhone LCDs-keeda cusub.
Haddii Aqoonsigaaga Face ID-ga uu guuldareysto, waxaa macquul ah in Apple uu bilaash kuugu beddeli doono iPhone X
Waxay u muuqataa inay jirto dhibaato yar oo taxane ah oo aan la ogaan karin iPhone X kaas oo ku guuldareystay inuu ...
HomePod wuxuu marin u heli karaa Jadwalkaaga oo ka bilaabmaya iOS 11.4
HomePod wuxuu marin ka heli karaa jadwalkayaga laga bilaabo cusbooneysiinta illaa iOS 11.4 si uu awood ugu yeesho inuu ku daro ballamo afhayeenka Apple
Kiiskan batari-ka ee lagu rakibay iPhone X wuxuu sidoo kale taageerayaa xukun wireless
Kiiskan 'iPhone X' wuxuu leeyahay batari ku dhex jira 3.600 milliamp sidoo kalena waa kii ugu horreeyay ee bixiya iswaafajinta lacag la'aanta wireless
Faransiiska, Jarmalka iyo Japan ayaa noqon doona waddamada soo socda ee hela HomePod
Sida ku xusan dukumiintigii ugu dambeeyay ee la dusiyay ee ku qoran bogga Apple, wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in HomePod uu dhawaan imaan karo Japan, France iyo Germany.
Sida loo maareeyo barnaamijyadooda marin u leh Aqoonsiga Face-ka ee iPhone X
Casharradan waxaan ku barinaa sida loo maareeyo marin u helka Aqoonsiga Face-ka ee barnaamijyada ku saabsan iPhone X. Sidan ayaan ku ogaan doonnaa barnaamijyada marin u heli kara nidaamkan iyo, haddii khilaaf jiro, marin-u-dhigida la joojiyo.
Apple wuxuu ku dari lahaa xeedho USB-C ah oo loogu talagalay iPhone-kiisa 2018
Marka loo eego wararka xanta ah ee silsiladaha sahayda waxay u muuqataa in Apple ay ku jiri karto xeedho USB-C ah iyo fiilo la jaan qaadi karta iPhone iyo iPad cusub
Gecko Keyboard Folio, oo ah kiiska kumbuyuutarka oo badan oo loogu talagalay iPad 2017 iyo 2018
Gecko wuxuu na siinayaa dabool kumbuyuutar oo aan biyuhu ka soo bixi karin oo kuu saari kara kaas oo kuu oggolaanaya inaad isticmaasho iPad-kaaga saacado badan oo shaqo qorista dhibaato la'aan.
Adiga kaligaa ma tihid qofka dhibaatada ku qabta ka ciyaarida PUBG qalabka dhageysiga ee bluetooth-ga
Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa muujinaya raaxo-darradooda markay ku ciyaarayaan dagaalka royale PUBG oo leh sameecadaha dhegaha leh ee loo yaqaan 'Bluetooth'
Guuldarooyinka Apple waa inay sugaan
Apple waxay soo bandhigtay tirooyin dhaqaale oo markale muujinaya in wararka xanta ah ee ku saabsan iibkiisa liita ay gabi ahaanba yihiin kuwo aan sal lahayn
Ogeysiisyada IMessage ma yeerayaan? Tani way kugu dhici kartaa adiga.
Waxaan la dhibtoonayay bug mudo sanado ah oo ka hor istaageysa iMessages inay soo garaacaan ama i soo ogeysiiyaan. Maanta, ugu dambayntii, waxaan helay xalka waanan kaaga warrami doonaa.
6,1 ″ iPhone waxaa laga yaabaa inuusan laheyn 3D Touch
Waxay u muuqataa in xanta ku saabsan moodooyinka cusub ee iPhone-ka ee sanadkan 2018 ay dib ugu soo laabanayaan ...
Shaqaaluhu waxay doorbidaan macruufka iyo Mac-yada Windows iyo Android
Kawaran haddii lagu doorto shirkaddaada? Natiijadu waxay tahay sida ku cad daraasad dhowaan la sameeyay, shaqaaluhu waxay doorbidaan inay fuliyaan shaqooyinkooda iyagoo adeegsanaya Mac ama iPhone
IOS 11 horeyba waxaa loogu rakibay seddex ka mid ah afartii qalab
Laga bilaabo maanta, iyo sida ku cad xogta rasmiga ah ee ugu dambeysay Apple, iOS 11 waxay leedahay saamiga korsashada ee dhammaan aaladaha firfircoon ee suuqa ee 77%
Sida loo helo qeexitaanka ama tarjumaada eray ku jira iOS 11
IOS 11, sida noocyadii hore ee macruufka, waxay ina siisaa qaamuusyo taxane ah si aan u ogaano macnaha ereyada iyo tarjumaadooda Isbaanishka
Shirkadda amniga ee GrayShift ayaa jabsatay. Haa, shirkaddii ku guuleysatay inay jabsato iPhone-ka ...
Bilowgii bishii Abriil warku wuxuu ku yimid shabakadda bilowga ee loo yaqaan 'GrayShift', kaas oo lagu guuleystay ...
Dib u cusbooneysii cusbooneysiinta PDF Khabiirka leh dukumiinti cusub oo daawade ah
Readdle ayaa cusbooneysiiyay barnaamijkeeda Khabiirka PDF iyadoo lagu darayo qaab bandhig cusub, iyo sidoo kale inay ku jiraan maamule fayl cusub oo daruuro kala duwan lagu kaydiyo.
Xiaomi waxay la jaan qaadi doontaa HomeKit dhamaadka 2018
Xiaomi waxay ku dhawaaqeysaa iswaafajinta aaladaha otomaatiga gurigeeda ee Apple's HomeKit iyo HomePod, iyo waliba barnaamijyo kale, dhamaadka sanadka.
Meizu wuxuu soo bandhigayaa samaacado sameecado leh oo buluug ah
Markay sannaduhu sii socdaan, dhagaha dhagaha ee 'Bluetooth' ayaa yaraynaya cabbirkooda si ay ugu fadhiistaan ​​meesha ugu yar ee suurtogalka ah labadaba ...
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 11.3.1 si uu u xaliyo arrimaha shaashadda aan rasmiga ahayn
Ragga ka socda Cupertino waxay sii daayeen cusbooneysi cusub oo loogu talagalay iOS, lambarka 11.3.1, kaas oo xallinaya dhibaatooyinka hawlgalka ee ay soo mareen iphone ee beddelay shaashadda aqoon isweydaarsi aan rasmi ahayn.
Ha dhibin habka wadista ayaa yareyneysa isticmaalka iPhone inta aad gaari wadid
Muuqaalka Ha Dhibin Inta Wadista Wadid waxay yareynaysaa adeegsiga dadka isticmaala Iphone-ka inta aad Mareykanka ku dhex wado.
Sida loo adeegsado kontaroolada PUBG 3D Touch ee iPhone-ka
Casharkaan waxaan ku sharaxeynaa sida PUBG 3D Touch uu u xakameeyo macruufka iyo sida ugu fudud ee loo kiciyo.
Shirkadda TSMC waxay rajeyneysaa faa iidooyin badan processor-ka xiga ee Apple A12
Soo saaraha TSMC wuxuu isu diyaarin lahaa inuu helo dheefaha aan waligood horay loo arag iyadoo la bilaabayo processor-rada cusub ee loogu talagalay iPhone.
Dib u eegida Amplifi Teleport, VPN-kaaga meelkasta
Amplifi Teleport waxay ku siineysaa suurtagalnimada inaad abuurto VPN si aad ugu xirto shabakada gurigaaga meelkastoo aad ku gasho god.
Sida loo geliyo muraayad qaboojiyeysan iPhone X [VIDEO]
Waxaan kuu soo qaadaneynaa cashar fiidiyow ah oo ku saabsan sida loo dhigo muraayad shaashad buuxda leh oo ku saabsan iPhone X, oo kuu oggolaaneysa inaad hal mar oo dhan u isticmaasho iPhone X adiga oo aan ka baqayn inaad jabiso shaashadda.
Sida loo kala sooco qoraallada ku qoran iPhone ama iPad taariikh ama cinwaanno
Xusuus-qorrada ku saabsan macruufka 'iOS' waa aalad aad u xoog badan oo aan maalinba maalinta ka dambeysa u adeegsanno. Taasi waa sababta nuxurka aan u abuureyno ay tahay in loogu dalbado sida ugu wanaagsan iyo habka ugu habboon baahiyaheena.
Apple waxay leedahay xubin cusub: Daisy, aaladda robotka ah ee awood u leh inay dib u isticmaasho 200 oo iphone saacad kasta
Tartankii loogu jiray hagaajinta joogtaynta shirkadda, raggii ka socday Cupertino waxay soo bandhigeen Daisy, aalado cusub oo awood u leh dib-u-warshadaynta ilaa 200 iPhone-ka saacaddii.
Sida loo ogaado heerka dammaanadda iPhone-kaaga adiga oo adeegsanaya barnaamijka «Apple Support»
Apple waxay bixisaa barnaamij loogu talagalay iOS -iPhone iyo iPad- oo ka socda Apple Support. Iyada oo aad ku hubin karto dammaanadda qalabkaaga si dhakhso leh oo fudud
Apple Pay waxay sii wadaa ballaarinta caalamiga ah ee Yurub, Shiinaha iyo Waqooyiga Ameerika
Ragga ka socda Cupertino waxay sii wadaan inay ballaariyaan adeeggooda Apple Pay, laakiin maaha dalal badan, waxayse diiradda saarayaan ballaarinta tirada bangiyada dalalka laga heli karo.
Beoplay P6, Siri-ku-hadalka ku hadla ee ka socda Bang & Olufsen
Bang iyo Olufsen waxay soo bandhigeen sameecad cusub oo loo yaqaan 'Bluetooth' oo la shaqeyn karta kaaliyaha dalwaddii Apple (Siri). Qaabka ayaa ah Beoplay P6
iFixit waa la sheegaa, dhibaatooyinka shaashadaha ku jira iOS 11.3 waa khaladaadka barnaamijyada
Maya, dhibaatada isticmaaleyaasha qaar ay ku hayaan shaashadaha dhinacyada saddexaad, sida iFixit, ee taleefannadooda iPhone 8 ma ahan shaashadda, ee waxay ka timid macruufka 11.3 laftiisa.
Sida loo abuuro gariirka gaarka ah ee iPhone-kaaga
Ma rabtaa inaad u abuurto gariir caado u ah iPhone-kaaga oo aad ugu xirto xiriir gaar ah? Waxaan ku bari doonaa talaabo talaabo
Sida loogu daro istiikarada Telegram
Haddii aad ku daashay marwalba inaad isticmaasho isla istiikar, maqaalkan waxaan ku tusineynaa sida aan ugu dari karno istiikarada cusub dalabka fariinta ee Telegram.
Macaamiisha Caja Rural iyo EVObanco hadda waxay isticmaali karaan Apple Pay
Waana tan maanta laga bilaabo macaamiisha Caja Miyiga iyo EVObanco horeyba waxay u heleen ikhtiyaar ay ku daraan ...
Bixin: Fibre 50 Mbps ah oo lagu daray 14,90 euro bishiiba Movistar
Movistar wuxuu bilaabay dallacsiin cusub oo noo oggolaaneysa inaan ku raaxeysano 50 Mb Internet iyo wicitaanno aan xadidnayn oo khadka taleefannada ah iyo 50 daqiiqo oo mobilada lagu qaato oo keliya 14,90 euro bishiiba inta lagu jiro sanadka ugu horreeya.
Sida loo maareeyo loona joojiyo rukummada lagu bixiyo koontadaada Apple
Apple waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka bixiso rukumo dhinac saddexaad ah qalabkooda, qodobkaan waxaad ku baran doontaa sida loo maareeyo loona tirtiro dhammaantood.
Xtorm Vigor Power Hub, ka qaado iPhone-kaaga, iPad-ka iyo MacBook hal xeedho oo keliya
Xtorm Vigor Power Hub waa saldhig lacag bixin ah oo noo oggolaanaya inaan dib u cusbooneysiinno illaa 7 qalab, oo ay ku jiraan laptop-keena.
La qabsashada xarunta cusub ee xakamaynta ayaa aad ugu fudud macruufka 11, maaddaama Apple ay ballaarisay tirada walxaha aan si dhakhso leh oo fudud u tusi karno ama u tirtiri karno.
Dukaanka dayactirka ee aan la fasaxin ee iPhone-ka ayaa garaacay Apple
In kasta oo Apple ay sameyso wax kasta oo suurtagal ah si looga hortago aqoon isweydaarsiyada dhinac saddexaad inay awood u yeeshaan inay si aan rasmi ahayn u dayactiraan taleefannada iPhone-ka, haddana Norway waxay hadda lumisay dacwad muhiim ah oo arrintan la xiriirta.
Wac, is-dhexgalka fiidiyowga oo wata maqal aad jeceshahay
Maalmahan haysashada wax kasta oo gacanta ugu jira meel kasta waa wax iska caadi ah kiiskanna waxa aan u soconno ...
Fashilka la sheegayo ee HomePod, ama sida looga helo wararka meel aan jirin
Mark Gurman wuxuu xaqiijiyay in iibka HomePod uu yahay mid niyad jab ah, laakiin waxaan kala jabineynaa xogta si aan u tusno in gabagabada uusan laheyn sal adag.
Tani waxay noqon kartaa iPhone X ee dahabka kacay
Waxaan ku tusineynaa fikrad ah sida iPhone X ee soo socda uu ula mid noqon karo midabka midabka u kacay dahabka, taas oo ay ugu wacan tahay bixinta naqshadeeyaha Martin Hajek.
Munaasabaddan awgeed, shirkad Kuuriyaan ah ayaa dacwad ku soo oogtay shirkadda Cupertino ka dib markii ay ku xadgudubtay rukhsaddeeda horumarinta aqoonsiga 'Touch ID'.
Oggolow ama diidso iibsiga «Qoys ahaan» oo leh Codso iibsiga
En Familia waxay na siisaa waddo fiican oo aan kula wadaagno koontada qoyskeenna iyadoo macnahaasna ay tahay inaan ...
Sida loo kiciyo ama loo joojiyo iftiinka otomaatiga ah ee iPhone ama iPad-ka leh iOS 11
Ma rabtaa inaad dhaqaajiso nuurka tooska ah ee iPhone-kaaga ama iPad-kaaga oo wata iOS 11 oo aadan aqoon meesha uu badhanku yaalo? Halkan waxaan ku tusaynaa meesha laga helo
Sida loo helo wicitaanada ka yimaada iPhone ee ku jira iPad ama Mac
Apple waligeed waxaa lagu yaqaanay inay bixiso menus qaabeyn aad u fudud, in kasta oo xaqiiqda ay tahay, in muddo ah ...
Kaligaa maahan kaligaa, Fortnite wuxuu xirnaa 12 saacadood
Waqtiga la daabacayo maqaalkan, ciyaarta caanka ah ee Fortnite ma shaqeynin 12 saacadood, xilligaas oo server-yada ay joojiyeen inay shaqeeyaan.
Nalalka guriga ee ku habboon gurigaKit mahad Koogeek
Waxaan tijaabineynaa alaabada nalalka Koogeek ee la jaan qaadi kara HomeKit: guluubka, bareesada iyo biiro. Hab la awoodi karo oo fudud oo lagu bilaabo otomaatiga guriga.
Sida loo furo feylka ZIP-ka iPhone-ka
Waxaan kuu keeneynaa tillaabooyinka aad ku furfuri karto feyl qaab .ZIP ah oo isku-dhafan laga soo qaaday iPhone-kaaga ama iPad-ka, oo ah beddel fudud oo dhakhso leh.
Uma arko aaladda kale AirDrop, maxaan sameyn karaa?
Waqtigan xaadirka ah waa inaan wada ogaanno faa'iidooyinka AirDrop, laakiin kuwa aan garanayn macnaheeda ama ...
Instagram waxay ku darsataa qaab muuqaal ah codsigeeda, iyada oo aan loo baahnayn laba kamarad
Shabakada bulshada ee Facebook, tan kale ee loo yaqaan Instagram, ayaa hada cusbooneysiisay codsigeeda iyadoo bilawday Muuqaal Sawir cusub oo noo ogolaanaya inaan ku qabanno sawirada dadka asalka u ah diirada.
Beddelista shaashadda iPhone 8 ee aasaas aan rasmi ahayn ayaa keenta in qalabka la xayiro
Haddii aad doorato inaad bedesho shaashadda iPhone 8, adeeg farsamo oo aan rasmi ahayn, waxaad halis ugu jirtaa inaad xannibto boosteejada, sababo la xiriira tallaabooyinka amniga ee Apple ay ka hirgelisay iOS 11.3.
Apple waxay wajahday cunaqabateyn Kuuriyada Koonfureed la xiriirta la macaamilkeeda
Gudiga kahortaga kalsoonida ee Kuuriyada Koofureed ayaa bilaabay inay baaraan sharciyada shirkadda Apple ay waddo shirkadaha xamuulka qaada waxayna wajahayaan cunaqabateyn suura gal ah, sida looga sameeyay dalal kale.
Mudaaharaadyo ka dhacay Faransiiska oo looga cabanayo sida Apple uga baxsato canshuuraha Yurub
Ururka Attac ayaa ku muujiyey dukaamo kala duwan oo Apple ah oo ku yaal Faransiiska, sidaas darteedna waxay muujinayaan diidmada qaabka Apple uga shaqeeyo injineernimada canshuuraha ugana fogaado bixinta canshuuraha dalka Faransiiska.
IPhone 8 iyo 8 Plus (RED) ayaa la bilaabi karaa berri, Isniinta
Apple waxay soo saari kartaa iPhone 8 iyo 8 Plus casaan Isniinta. IPhone-ka cusub ee RED ayaa imaan kara Isniintaan, laga yaabee inuu ku xigo saldhigga AirPower.
Tani waxay noqon kartaa samaacadaha Apple
Fiidiyow ayaa ina tusaya waxa sameecadaha dhagaha ee Apple ay noqon karaan oo kale oo suuqa ku dhici kara dhammaadka 2018 ama horraanta 2019.
Xtorm Angle, waa saldhig lagu dalaco oo lagu arko waxa ku dhaca mobilkaaga
Xtorm Angle waa xayiraad lacag la'aan ah oo aad ku dhejin kartid iPhone-kaaga si toos ah oo toosan si aad u aragto shaashadda intaad ku amreyso.
HomePass, oo ah barnaamijkii Apple uu ilaaway inuu ku daro HomeKit
HomePass ee HomeKit waa barnaamij loo baahan yahay in loo helo kuwa haysta aaladaha otomaatiga guriga Apple oo aan rabin inay dhibaato kala kulmaan luminta lambarrada hawlgelinta.
Ruushka ayaa dacwad ku soo oogay Telegram waxayna ku dhamaan kartaa xannibaadda
Ruushka ma dhiibanayo sidoo kalena Telegram ma bixinayso ... Natiijada, dacwad ay soo gudbiyeen waaxda kantaroolka isgaarsiinta dowladda ee dalka ...
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa nooca iTunes-ka ee Apple Store ee ganacsiga
Ragga ku saleysan Cupertino waxay cusbooneysiiyeen nooca iTunes-ka ee laga heli karo bogagga taageerada Apple waxayna na siinayaan marin u helka App Store.
Maqnaanshaha AirPower, mophie wuxuu bilaabayaa saldhig 10W Qi ah
Tani waa sida mophie ay ugu dambayntii u bilawday saldhig lacag la'aan ah 10W wireless oo leh qiyaasta Qi oo ka raqiisan AirPower.
2kiiba 10 ayaa ah dhibcaha ay iFixit siiso iPad 2018
Sannad kale, dhibcaha dib-u-hagaajinta ee uu helay iPad-ka Apple weli aad buu u hooseeyaa: 2 10kiiba
AirPort Express waxay la jaan qaadi kartaa Airplay 2 sida ku cad beta-ka iOS 11.4
AirPort Express, oo ah badeecad Wi-Fi ah oo la sii daayay sanadkii 2012, ayaa laga yaabaa inay la jaan qaadi karto AirPlay 2 sida faahfaahinta ku jirta muujinta beta ee iOS 11.4.
Apple waxay shaqaaleysiisay madaxa sirdoonka macmalka ee Google
Apple wuxuu kireystay madaxa sirdoonka macmalka ee Google si uu u hogaamiyo qeybtaan ka tirsan Apple
Sida ugu fudud ee loogu dhaqaajiyo barnaamijyada labada farood
Xaqiiqdi inbadan oo idinka mid ah ayaa xoogaa wareersan marka ay tahay inaad abaabusho ama aad gudbiso codsiyada mid ...
Fiidiyowga 720p iyo in ka badan 360 ° sawirro ayaa ka soo degay Facebook Messenger
Facebook ayaa cusbooneysiisay codsigeeda farriinta oo na siineysa fiidiyoow tayo sare leh HD iyo suurtagalnimada in lala wadaago sawirada 360 °. Astaamahani waxay horeyba uga jireen barxadda guud.
4K isbarbardhigga fiidiyowga ee u dhexeeya iPad Pro 9,7 iyo iPad 2018
Haddii aad qorsheyneyso inaad cusbooneysiiso 9,7-inch iPad Pro-kaaga ah iPad-ka cusub ee 2018, waxaa fiican inaad marka hore eegto isbarbardhiggan, maxaa yeelay ma ogaan doontid isbeddel weyn oo xagga awoodda ah.
Apple iyo TSMC waxay gacanta ku hayaan soo saarista bandhigyada MicroLED
Kadib xan badan iyo hadal badan oo ku saabsan soo saarista iyo horumarinta bandhigyada MicroLED ee Apple ...
Huawei waxaa mar kale dhiirrigeliyay Apple oo soo bandhigeysa hal kabo ah AirPods
Huawei mar kale waxay cadeyneysaa mala-awaal la'aanta iyadoo si cad ugu miiraneysa 'AirPods' iyada oo leh dhageysigeedii ugu horeeyay ee wireless-ka.
Barnaamijka Spotify ee loogu talagalay Apple Watch ayaa dhawaan noqon kara mid dhab ah
Spotify waxay ku soo bandhigi kartaa barnaamijkeeda Apple Watch barnaamijka WWDC ee sannadkan, saddex sano ka dib iyada oo aan lahayn barnaamij la jaan qaada watchOS.
Sida loo beddelo Sawirro Live ah sawir muhiim ah oo lagu soo bandhigo Sawirrada iOS
Keenida sawiradaada nolosha waa fududahay Sawirka Tooska ah. Hadda, sawirka muhiimka ah - sawirka ka muuqda maktabadda sawirka— kuma qancin karo, si fudud ugu beddelo
Griffin PowerBlock Wireless Charging Pad, xeedho cusub oo wireless leh oo leh 15W oo ah awood ku shubasho
Griffin wuxuu soo saaray xeedho cusub oo leh tikniyoolajiyadda Qi, oo diiradda lagu saaray iPhone-ka cusub. Kani waa Griffin PowerBlock Wireless Charging Pad
Tani waa sida "Battery Health" u shaqeyso, muuqaalka cusub ee iOS 11.3
Waxaan kuu sharraxeynaa qaabka cusub ee "Battery Health" qaabka uu u shaqeeyo iyo waxa mid kasta oo ka mid ah gobollada kala duwan ee laga helo laga heli karo macnahoodu yahay.
Gecko Bouce Cover wuxuu ballan qaadayaa ilaa saddex mitir oo ilaalin ah
GHEcko wuxuu na siiyaa kiis ballan qaadaya kahortaga dhibcaha ilaa 3 mitir ee iPhone X, iPhone 7 Plus iyo 8 Plus
Sida loo cusbooneysiiyo HomePod nooca ugu dambeeya ee la heli karo
Qofka ku hadla Apple, HomePod, sidoo kale wuxuu helaa cusbooneysiinta softiweerka waxaanan u sharraxeynaa tallaabo tallaabo ah sida loo rakibo
Foxconn waxay ku dhawaaqeysaa Iibsiga Belkin
Shirkadda Aasiya ee Foxconn ayaa ku dhawaaqday inay iibsatay Belkin, oo ka mid ah soo saarayaasha ugu waaweyn ee kaabayaasha qalabka ee ay Apple ka shahaado siisay iPhone, iyadoo ay weheliyaan dhammaan shirkadaha qaybta ka ah sida Wemo, Linksys iyo Phyn.
Ku-dallaca wireless-ka ma u xun yahay batterigaaga?
Ma runbaa in fiilada wireless-ku ay waxyeello u geysan karto batterigaaga? Waxaan falanqeynaa fikradaha khubarada waxaanan soo koobeynaa sida aad u daryeeli karto batterigaaga iPhone-ka
Dhacdadan galabta ma ahan mid loogu tala galay caruurta, inkastoo ujeedkeedu yahay iskuulo
Dhacdada galabta waxay soo bandhigi kartaa hal-abuurnimo softiweer oo muhiim ah oo loogu talagalay waaxda waxbarashada si loo soo celiyo dhulkii uu lumiyay iPad-ku
Jilicsanaanta ugu dambeysa ee ku jirta macruufka waxay saameyn ku yeelaneysaa kaamerada ka akhrisashada lambarrada QR
Ciladdii ugu dambeysay ee lagu ogaado macruufka 11, waxaan ka helnaa arjiga kamaradda markaan isticmaaleyno aqristaha QR code, kaasoo noo weecinaya degel ka duwan kan hore loo soo bandhigay.
Isbedelka naqshada weyn ee soo socda ee iPhone wuxuu noqon karaa 2020: iPhone la laaban karo
Ogeysiisyo ayaa soo baxay oo sheegaya in Apple ay ka shaqeyn doonto nashqad cusub oo iPhone ah oo imaan doonta laba sano kadib. Waxay noqon lahayd iPhone laab laaban
Waxaad arki kartaa dhacdada Talaadada soo socota, Maarso 27 ... dib u dhac
Dhacdada Apple si toos ah looma baahin doono laakiin waxaan awoodi doonaa inaan wada aragno wararka oo dhan marka la dhammeeyo codsiga Apple TV
Sidan ayaa loo toogtay shaashadda 'HomePod' Welcome home '
Tufaaxu aad buu u cad yahay markay ku qasban tahay inuu sharad weyn ku galo xayeysiinta sheyga ama sida ay muhiimka u tahay toogashada ...
Jimmy Iovine doorkiisa Apple wuxuu noqon doonaa mid aan khusayn
Mid ka mid ah nashqadeeyayaashii guusha Apple Music, Jimmy Iovine, ayaa sii wadi doona inuu ka ciyaaro door taageero Apple Music, si uu diiradda u saaro qoyskiisa, sida ay sheegtay WJS
Sida loo ogaado in iphone-kaaga ama iPod-gaaga ay waxyeello ka soo gaadhay dareerayaasha
Laga bilaabo 2006, dhammaan iphone-yada iyo iPod-yada waxay leeyihiin Muujiye Xiriiriyaha Liquid, ama LCI. Oo halkan waxaannu kaaga tagaynaa meelaha ay ku sugan yihiin tilmaamahan nooc kasta
Codsiga Seexashada ++ ee lagu kormeerayo hurdada wuxuu helaa warar muhiim ah
Codsiga la socoshada hurdada, Seexashada ++, ayaa hadda heshay cusbooneysi cusub oo aan loo baahnayn in la kiciyo arjiga si loo bilaabo kormeerka hurdada.
Sida loogu daro ama looga saaro faahfaahinta kaarkaaga deynta Safari autofill-ka iOS
Ma dooneysaa inaad ka saarto ama ku darto kaararka amaahda Safari ee "Autofill" muuqaalka iOS? Halkan waxaan kaaga tagnay cashar buuxa oo aad ku fuliso
Runtastic Wadada Baaskiilka GPS Pro, bilaash wakhti go'an
Haddii aad rabto inaad bilawdo ku raaxaysiga baaskiil wadista hada oo cimiladu fiicantahay soo socoto, waad ka faa'iideysan kartaa dalabka Runtastic oo waxaad kala soo bixi kartaa Runtastic Road Bike GPS Pro si bilaash ah
Amazon Spain waxay ku darsataa rukhsad caymis bishiiba
Xaqiiqdii, inbadan oo idinka mid ah waxay horeyba uheleen rukunka Amazon Prime hal sano, laakiin kuwa idinka mid ah oo aan ...
CordDock, oo ah qalab yar oo iPhone ah oo leh fiilo hillaac gaar ah
Ma rabtaa xero iPhone ah oo ka duwan kuwa kale? Laga soo bilaabo 'MountLab' waxay leeyihiin CordDock, oo ah saldhig aad u yar oo leh fiilo hillaac gaar ah
Sida loo dejiyo waqti xaddidan oo ku saabsan iPhone iyo iPad
Waxaan kuu sharaxeynaa sida aad waqti go'an ugu dejin karto isticmaalka barnaamijyada, wax aad u anfacaya carruurta iyo cayaaraha loogu talagalay iPhone iyo iPad.
Baytariyada Lithium iyo silicon waxay bixin karaan 20-40% lacag ka badan
Warshaduhu waxay horumarinayaan baytariyada lagu sameeyo lithium iyo silicon, si loo ballaariyo awooddooda, taas oo ka ilaalinaysa inay lacag ka qaataan qalabkeenna wareega habeen kasta.
Muxuu barnaamijka Gurigu u lahayn wax widget ah iyo sida ugu dhakhsaha badan ee loogu heli karo agabkeena
Apple waxay ku dhex samaysatay fure u gaar ah Xarunta Xakamaynta taas oo noo oggolaan doonta inaan ku helno dhammaan agabyada jaleeco, aan aragno sida ay u shaqeyso.
Isticmaalayaasha IPad Hada Waxay Isku dayi Karaan Beta Browser Beta Microsoft
Nooca kumbuyuutarka Microsoft Edge ee loogu talagalay iPad-ka hadda waa la heli karaa, in kastoo xilligan oo keliya beta, iyada oo ficil ahaan la mid ah shaqooyinka sida nooca loogu talagalay iPhone.
AirPower way qaadan kartaa xitaa waqti dheeri ah - ma jirto ogolaansho FCC wali
Saldhigga AirPower wuxuu qaadan karaa xitaa waqti dheer sababtoo ah mid ka mid ah shahaadooyinka loo baahan yahay in lagu iibiyo suuqa
Apple waxay ku sameyneysaa bandhigyo microLED u gaar ah California
Sida laga soo xigtay Bloomberg Apple wuxuu ka shaqeyn lahaa shaashadaha microLED mustaqbalka ee warshad qarsoodi ah oo ku taal California, oo u dhow xarunteeda.
Afar khiyaano si kor loogu qaado aqoonsiga wajiga ama Aqoonsiga Face
Waxaan ka wada hadalnaa qaar ka mid ah khiyaanooyinka kaa caawin kara Aqoonsiga Face ID inuu si fiican u shaqeeyo iyadoo la aqoonsanayo wejigaaga xaaladaha qaarkood
Sida qandaraas dheeraad ah looga helo iCloud ka iPhone ama iPad
5-ka bilaashka ah ee iCloud Drive-ka ah miyaanay kugu filnayn? Waxaan ku tusineynaa sida qandaraaska ugu balaaran ee iCloud laga helo qalabkaaga iOS (iPhone ama iPad)
Sawirada qalabka awood u leh helitaanka koodhka furaha ee iPhone ama iPad ayaa soo ifbaxay. Magaciisu waa GrayKey
Oo waxaan sii wadnaa sugitaanka, beta lixaad ee iOS 11.3 hadda waa la heli karaa
Mar labaad ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen beta cusub iOS 11.3, markan ...
Apple waxay ku dhawaaqday dhacdo 27 Maarso
Apple waxay ku dhawaaqday dhacdo si gaar ah ugu heellan waaxda waxbarashada 27-ka Maarso taas oo ka dhici doonta Chicago, oo ku taal xarun waxbarasho oo aad ugu foogan farsamada.
Street Fighter II ee AR waa mid cajiib ah oo Apple waa inay u dagaallanto inay hesho
Markii aan eegnay sawirka uu Apple ku daray WWDC-da sanadkan kama caawin karno laakiin waxaan u maleyneynaa inay yihiin…
Hill Climb Racing 2, wuxuu ku yimaadaa nooca 1.14.2 oo leh gaari cusub oo super ah iyo horumarin dheeri ah
Ciyaarta aaladaha iOS, Hill Climb Racing 2, maanta waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ...
Fiidiyow la sheegay inuu yahay iPhone SE 2 ayaa soo muuqday
IPhone SE 2 loo maleynayo inuu ka muuqdo fiidiyow oo yeelan doona naqshad la mid ah iPhone X laakiin leh qalab yar.
Qoysaska Apple, qaybta leh tilmaamaha waalidiinta iyo isticmaalka xakamaynta waalidka
Qoysaska Apple waa qaybta cusub ee websaydhka Apple kaas oo lagu wadaagayo talooyinka waalidiinta loona sharxayo dhammaan xulashooyinka xakameynta waalidnimo ee laga heli karo macruufka.
QNAP TS-251 + NAS dib u eegis (ama maxaad ugu qasbaysaa inaad NAS gasho noloshaada)
QNAP TS-251 + NAS Dib u eegis. Waxaan falanqeyneynaa fursadaha ay bixiyaan nidaamyada keydinta NAS ee leh awoodda QNAP TS-251 +, oo ah ikhtiyaar aad u fiican oo xirfad iyo adeegsi shaqsi ahaaneed ah for 366 oo keliya oo bixiya howlo ballaaran.
Sida loo demiyo ogeysiisyada fariimaha ka socda barnaamijka aan la aqoon ee dirayaasha
Haddii aad ka daashay inaad ku hesho farriimaha iMessage ee ka soo diraya naloo yaqaan oo aan ku kaydsan nahay ajandaheena, qodobkan waxaan ku tusaynaa sida looga fogaado.
Kuxir xiriiriye WhatsApp
Waxaan kuu sharaxeynaa waxa ay tahay inaad sameyso si aad u joojiso xiriirka WhatsApp. Haddii nambarku ku dhibayo oo aad rabto inaad ka joojiso WhatsApp si aanu kuugu soo dirin farriimo dheeraad ah, waa tallaabooyinka ay tahay inaad raacdo.
Dhibaatooyin badan oo ku saabsan baytariyada Apple, AirPod ayaa ku qarxay adeegsade
Waxyaabaha ku adkaanaya Apple baytariyada, batterigii ugu horreeyay ee AirPod ayaa hadda uun qarxay, iyada oo aan wax dhibaato ah dhicin oo Apple ay durbaba baareyso ...
Waxaan tijaabinay The Dash Pro, Bragi. Is-maamul-wanaagsanaan ka wanaagsan noocaan ah dhagaha dhagaha ee 'wireless wireless'
Waana wax yar uun ka hor sanad ka hor waxaan fursad u helnay inaan tijaabinno tusaalihii ugu horreeyay ee ...
Spigen Muhiimka ah F306W iPhone Wireless Charger, xeedho wireless ayaa diiradda saaray iPhone X
Shirkadda caanka ah ee qalabka loo yaqaan 'Spigen' ayaa soo bandhigtay xeedho cusub oo la jaanqaadaysa tikniyoolajiyadda Qi waxayna diiradda saartay iPhone-ka cusub: Spigen Essential F306W
Farriimaha PlayStation waxaa lagu cusbooneysiiyay horumar muuqda oo ku saabsan waxqabadka barnaamijka
Farriimaha PlayStation waxaa lagu cusbooneysiiyay horumarin la taaban karo oo ku saabsan waxqabadka barnaamijka oo hadda runtii waxtar u leh fariimaha saaxiibbadeenna PSN.
WatchChat, waa barnaamijka ugu fiican ee WhatsApp laga helo Apple Watch
WatchChat waxay na siineysaa suurtagalnimada isticmaalka WhatsApp-ka ee Apple Watch oo leh codsi deg deg ah oo deggan oo waliba noo oggolaanaya inaan dhageysano qoraallada codka
Ming-Chi Kuo, oo ah falanqeeyaha ugu weyn ee KGI Securities, ayaa ka digaya in qaabkan cusub ee shirkadda South Korea ay soo bandhigi doonto xiga ...
Waxaan ku baraynaa sida loo joojiyo baaritaanka iPhone-kayga, mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan uguna amniga badan Apple ayaa na siisa marka ay timaado ka ilaalinta aaladeena tuugada ama luminta, laakiin mararka qaar waxaan u baahanahay inaan ka furtin si aan u iibino mobilada, una hagaajino ama wax kasta oo kale.
Toddobaadkan dhammaadkiisa, eBay wuxuu na siiyaa tiro badan oo ah alaab elektaroonig ah oo leh qiimo dhimis dhan 60%.
RADIUS X, kiis kale oo ka duwan iPhone X
Ma waxaad dooneysaa kiis kale oo ku saabsan iPhone X? Shirkadda mod-3 ayaa soo bandhigtay iyada oo loo marayo Indiegogo kiis la yiraahdo RADIUS X
$ 15.39 loogu talagalay Aqoonsiga Apple ee Shabakada Madow
Iibinta waraaqaha aqoonsiga (kaararka deynta, xisaabaadka bangiga, Netflix, PayPal, baasaboorrada, ...) ayaa muuqda. Hadafka ugu dambeeya ee injineernimada bulshada waa in la helo macluumaad kadibna la iibiyo. Haddii aysan iibin ama wax macaash ah ka helin, macno malahan in sidaas la sameeyo.
HomePod ka raqiisan iyo MacBook Air oo lagu daray iPad Pro leh aqoonsi Face ah
Apple waxay isku diyaarineysaa inay ku dhameystirto noocyada kala duwan ee alaabooyin iyada oo la bilaabayo qiimo jaban oo ku habboon miisaaniyadaha oo dhan.
Sida looga fogaado jidadka waaweyn iyo kuwa laga qaado Khariidadaha iPhone-kaaga
Ma rabtaa inaad ka fogaato dhammaan jidadka waaweyn iyo kuwa laga qaado jidadkaaga baabuur adoo isticmaalaya Khariidadaha iOS? Waxaan ku sharaxeynaa sida loo sameeyo dhowr talaabo
Mophie waxay u diyaarisaa kiiskeeda xeedho ee iPhone X oo leh shahaadada Qi
Mophie waxay u diyaarisaa kiisaskeeda xeedho cusub iPhone X kaas oo la jaan qaadi doona heerka Qi ee ku-dallaca wireless-ka
IOS 11.3 nooca ugu dambeeya wuxuu sii wadaa dib udhaca falanqeeyayaashuna markale wey fashilmaan
Waxay u muuqataa in taariikhda ay Apple bixisay bilowgii la xaqiijiyay, ma arki doonno iOS 11.3 illaa Guga.
Ka soo kabsado sawiradaada, xiriiradaada ama xogta kale iPhone si dhakhso leh oo fudud FoneLab
Dhowr sano iyo sida teknolojiyaddu u soo baxday, intiinna badan, hubaal waad ka tagteen ...
Gurman wuxuu shaaca ka qaaday in joojinta buuqa ay ku jiri laheyd samaacadaha cusub ee Apple
Si tartiib tartiib ah ayaynu u arkaynaa macluumaad dheeri ah iyo xog ka baxaysa waxa laga filayo dhagaystayaashan Apple la mooday….
Tilmaamaha ugu wanaagsan ee 3D Touch ee aan ku haysanno Apple Watch
Waxaan kuu soo qaadaneynaa safar gaaban oo ah waxyaabaha ugu xiisaha badan 3D taabashada ee Apple Watch, kaas oo kaa caawin doona inaad aad ugu sii fiicnaato adoo adeegsanaya adeegsadaha isticmaalaha
Apple waxay naga caawineysaa aqoonsiga emaylladaada sharciga ah iyo kahortaga phishing
Apple waxay cusbooneysiisay websaydhka Ingiriisiga ah ee naga caawinaya aqoonsashada emayllada isku dayaya inay iska dhigaan. Websaydhka Isbaanishku wali wuu shaqeynayaa, laakiin wali lama cusbooneysiin. Waa caawimaad gaaban oo lagu kabayo degelkan kale ee Apple ee ku saabsan khayaanada boosta, wicitaano ama ogeysiisyo been ah.
Muddo intee le'eg ayuu aaladda Apple soconayaa? Xaqiiqdii maaha afar sano isku celcelis
Falanqeyn dhowaan la sameeyay waxay hubineysaa in celceliska nolosha aaladaha Apps-ka ay qiyaastii yihiin afar sano, wax aan ka tarjumeynin xaqiiqda
Apple waxay rabtaa inay diiwaangaliso "giraan" Apple Park
Oo waxaan hore u aragnay in shirkadda Cupertino ay ku lahayd bakhaarkeeda alaabooyin badan oo leh calaamadda wareega ...
Fikradda koowaad ee sida ay u ekaan karto iPhone X Plus
Waxaan ku tusinaynaa muuqaalka ugu horreeya ee muuqaalka ah, sida loo barbar dhigi karo kan hadda jira ee iPhone X, kan xiga ee iPhone X Plus, haddii ugu dambayntii laga billaabo suuqa sida ku cad macluumaadka ay maalmo ka hor daabacday shirkadda Bloomberg.
D-Link HD Mini, cabir ahaan iyo qiime ahaanba
Kaamirada D-Link waxay isku daraysaa cabir aad u yar oo leh qiime isku sifooyin ah laakiin codsi leh fursado badan.
Apple waxay ku dareysaa laba casharro fiidiyow oo cusub si loo hagaajiyo xirfadaheena sawir qaadista
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa soo bandhigtay labo fiidiyow oo cusub oo na tusaya sida aan uga faa’iideysan karno kamaraddeena iPhone-ka.
Apple ayaa wajaheysa in ka badan 60 dacwadood oo ku saabsan si ula kac ah u gaabiyay iPhone-ka
Ilaa hadda, Apple waxaa soo food saaray in ka badan 60 dacwadood oo ficil ah, gudaha Mareykanka oo keliya, ka dib markii uu isku dayay inuu dhiirrigeliyo iibsashada iPhone cusub isagoo si aan ula kac ah u gaabinayn moodelladii hore ee baytariyada xaaladoodu liidato.
SurfacePad ee loogu talagalay iPhone X, kiis leh qaab u gaar ah
SurfacePad waa kiiska ugu yar ee "jeebka" loogu talagalay iPhone X oo leh naqshad aad u fiican iyo qalab heer sare ah, inkasta oo kharashkiisu yar yahay ilaalintiisa.
Sida loogu faaruqiyo xusuusta RAM-ka iPhone X habka ugu fudud
Waxaan ku tusineynaa sida aad ugu faaruqi karto xusuusta RAM ee iPhone dhowr talaabo oo fudud.
Apple ayaa bilaabi doonta saldhigga amarka AirPower inta lagu jiro bisha Maarso
Wax walba waxay tilmaamayaan wiilasha Cupertino ee bilaabaya saldhigga cusub ee lacag-bixinta wireless, AirPower, inta lagu jiro bisha Maarso.
Qaar ka mid ah AirPod-yada cusub ee sanadkan, biyaha u adkeysanaya 2019
AirPod-yada cusub ee sanadkan iyo nooc kale oo biyo-la’aan ah sanadka dambe ayaa ah ujeedooyinka Apple sida lagu sheegay warbixin Bloomberg ah.
Apple ayaa soo saartay seddex fiidiyow oo cusub si ay kuu baraan sida loo sawiro iphone-ka
Apple waxay ku cusbooneysiisay kanaalkeeda YouTube saddex fiidiyow oo cusub oo naga caawin doonta inaan wax badan ka soo saarno kamaraddeena iPhone, labadaba fiidiyow iyo sawirba.
Spotify waxay rabtaa afhayeen u gaar ah waxayna durba raadineysaa injineero
Ka dib Google, Amazon iyo Apple, Spotify waxay umuuqataa inay go'aansatay inay bilaabaan afhayeenkooda. Sharad ku saabsan sheyga Apple-uxiran ee xiran? Mise sifiican ayuu kudheeraa kuhadalka qaab dhismeedka?
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 11.3 Beta 3 ee loogu talagalay Soo-saareyaasha
Apple waxay soo saartay nooca cusub ee iOS 11.3, oo ah kii saddexaad ee Beta, kaas oo hadda kaliya ay heli karaan horumariyeyaasha. Waxaan kuu sheegeynaa warka.
Dib-u-eegista HomePod: af-hayeenka ugu fiican inkasta oo aanu caqli badnayn
Waxaan fiirineynaa HomePod, oo ah afhayeenka ugu horreeya ee shirkadda ee muusikada jecel ay aad u jeclaayeen. Shaqooyinkeeda, codkeeda, cilladaha ay leedahay, halkan oo dhan.
Belkin wuxuu Daahfuray ilaaliyaha shaashadda cusub ee iPhone X, InvisiGlass Ultra Screen Protector
Haddii ay jiraan summad suuqa ku taal oo kalsooni siinaysa isticmaaleyaasha Apple marka la eego qalabka ...
Pad & Quill wuxuu bilaabayaa xoogaa ilaaliyeyaal maqaar ah oo loogu talagalay saldhigga HomePod
Maalin kadib dhibaatada HomePod ee ku saabsan dusha alwaaxda la daaweeyay ayaa soo shaac baxday, soo saaraha Pad & Quill ayaa soo saaray kiis maqaar oo loogu talagalay saldhigga HomePod.
Gamevice waxay sii deyneysaa darawal gaar ah oo iPhone ah oo loogu talagalay macdanta 'Minecraft'
Ragga ka socda Gamevice waxay soo bandhigaan nooc gaar ah oo ka mid ah kantaroolaha ciyaarta fiidiyowga ee caanka ah ee iPhone oo si gaar ah loogu talagalay Minecraft.
HomePod wuxuu kaga tagi karaa calaamadaha dusha sare qaarkood, gaar ahaan qoryaha
Dhibaatooyinka ugu horreeya ee HomePod ay muujinayaan kuma xirna tayada codkiisa, laakiin calaamadaha qaarkood ayuu ka tagayaa marka la dhigo dusha sare ee alwaaxda.
Waxaan ku falanqeynaa Sonos One, Sonos beddelka leh kaaliyaha codka
Sonos One cusub ayaa ah beddelka kaaliyaha codka ee Sonos uu suuqa galiyay kan ugu baahida badan ee maqalka ah, waana kuu soo bandhigeynaa.
Plux waa beddel aad uga jaban AirPower
Taasi waa sababta ay shirkadan aan maanta ku tusinay ay ugu deg degtay inay bilowdo bedel ka duwan kan AirPower oo aad uga jaban, waxaa loo yaqaan Plux Charger.
France way ganaaxi doontaa wadayaasha taabashada taleefanka casriga ah ee gaariga gudihiisa xitaa haddii mishiinka la joojiyo
Waana halkaan halka ay wax badan ka dhihi karaan CarPlay ... Waddanka deriska la ah maamulka ayaa ku daalay helitaanka darawallo ...
Maalintaan Jacaylka ee 'Mobag Day' ayaa ku siinaysa bakhtiya-nasiibkayaga cajiibka ah
Waxaan soo bandhigeynaa Mobag, sumadda Isbaanishka ee boorsada caqliga leh ee adigu noqon karta mid gebi ahaanba bilaash ah adigoo kaqeyb galaya tartankayaga
Warbixinnada Macaamiisha iyo HomePod… Hore ayaan u arkay filimkan
Warbixinnada Macaamiisha ayaa mar kale abuuraya muran la xiriira dib u eegista ay ku sameynayaan alaabada Apple, laakiin tani mar dambe lama yaabin qofna waxayna u badan tahay in toddobaadyo yar gudahood ay si kale u oran doonto
Apple waxay daabacdaa xayeysiis cusub oo diiradda saaraya qaabka sawirka
Ragga ka socda Cupertino waxay soo dhigeen seddex fiidiyow oo cusub bartooda YouTube-ka halkaas oo aan ka arki karno sida aan u abuuri karno sawir-gacmeedyo adoo adeegsanaya qaabka sawirka, sida aan u saxi karno iyo sida loogu daro saameynta soo kabashada ee Sawirada Tooska ah.
Noontec Hammo Wireless, raaxada iyo dhawaaqa cad ee dhagaha ku jira sameecadaha dhagaha la '
Noontec Hammo Wireless waa sameecado-sarre oo dhammaad ah oo aad ku isticmaali karto iyo bilaa bilooyin. Waxay leeyihiin teknoolojiyada Bluetooth iyo NFC oo dhawaqoodu aad u fiican yahay
Hadiyadaha daqiiqada ugu dambeysa ee Maalinta Jacaylka
Waxaan ku siineynaa xul ah hadiyado daqiiqadii ugu dambeysay oo wali imaan doona waqtigii loogu talagalay Febraayo 14, iyo dhamaanba Amazon, adigoon guriga ka bixin.
Dhageysiga maqalka, dhawaqa HomePod wuxuu umuuqdaa mid cajiiba
Falanqaynta ugu horreysa ee dhawaaqa uu sii daayay HomePod ka dib, qaar badan waxay dhahaan waa aalad weyn oo loogu talagalay qof kasta oo xiiseynaya dhageysiga dhammaan nuucaan muusigga uu dhageysto.
Dhawaaq tayo sare leh ayaa ah xanaaqa oo dhan, waxaan dib u eegeynaa Sonos Play: 1
Maanta waa inaan dib u eegno Sonos Play: 1, mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee dhawaqyo tayo sare leh leh Wi-Fi shaqeynaya.
Burburka HomePod ee iFixit ayaa halkan yaal, oo waxoogaa yaab ah ayuu ku darayaa gudaha
Markan burburka ama halkii "burburka" HomePod yimid goor dambe intii la filayay in ...
Tilmaamaha isticmaalaha HomePod ayaa hadda laga heli karaa websaydhka Apple
Apple waxay sameysaa hagaha isticmaale ee HomePod oo aan heli karno, hage aan ku baran karno dhammaan howlaha iyo fursadaha uu HomePod na siiyo.
Kuwani waa fiidiyowyadii ugu horreeyay ee 3 ee HomePod oo muujinaya sida ay u shaqeyso
Haddii aadan weli hubin haddii HomePod uu daboolayo baahiyahaaga, qodobkaan waxaan ku tusaynaa saddex fiidiyow oo aad ku arki karto sida ay u shaqeyso, sida loo qaabeeyo iyo faa'iidada aan ka heli karno Siri.
ShutterGrip, oo ah dhammaystir dhammaystiran oo lagu sawiro iPhone-kaaga
ShutterGrip waa qalabka loo yaqaan 'Just Mobile' oo loogu talagalay kuwa inta badan u adeegsada iPhone kamarad ahaan, noqosho, koontarool fog iyo adabtarada safarka.
Dayactirka HomePod ee aan lahayn AppleCare + waxay ku kacaysaa $ 279
HomePod wuxuu durbaba bilaabay inuu gaaro isticmaaleyaashii ugu horreeyay ee qalabkooda keydiyay Janaayo 26, ...
Sida loo sii daayo boos on your iPhone
macruufka 11 iyo WhatsApp waxay na siinayaan qalab noo ogolaanaya inaan dib ugu soo ceshano meel bilaash ah oo bilaash ah iPhone-keena oo runti aad u bogi doonto
Sida rasmiga ah ee Apple u xaqiijisay, daadinta macruufka 9 koodhka koodhku wax khatar ah kuma keenayso amniga nooca ugu dambeeya ee iOS.
Sida Si Deg Deg Ah Loogu Qiimeeyo Faallooyinka App Store
Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan qiimeyno tayada qiimeynta ay isticmaaleyaashu kaga baxaan macruufka App Store